ယေရှုခရစ်တော် | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
ယေရှု၏ မွေးနေ့ ရက်၊ လ၊ နှစ်တို့ကို ဖေါ်ပြပေးလို့ ရနိုင်ပါသလား၊ ဖေါ်ပြပေးနိုင်ပါက ယေရှုကို ကိုးကွယ်ပါမည်? December 10, 2009
ယေရှု၏ မွေးနေ့ကို မေးသောမေးခွန်းကြီးမှာ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် ခရစ်ယာန် တို့ရှုံးနိမ့်သွားသည်ဆိုသည့် ဝါဒပြိုင်ပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ ၄င်းရွာလေးတွင် ထမ်းပိုးမညီသော လူကြီးအိမ်တစ်အိမ်ရှိပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များလာတိုင်း ၄င်းတို့၏အိမ်တွင် တည်းခို ကြကာ ကျွေးမွေးဧည့်ခံရသည့် အကြောင်း တို့ကြောင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးစရိတ်နှင့် ကုန်ကျမှု များ များလာသည့်အတွက် လင်မယားချင်း ဆွေးနွေးပွဲစခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နှစ်ဦးသဘောတူ ၄င်းတို့ရွာမှ ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် သင်းအုပ်ဆရာတို့ကို တရားဆွေးနွေး စေခဲ့ပြီး အနိုင်ရ မှန်ကန်သောဖက်သို့ နှစ်ဦးစလုံး ဘာသာပြောင်းမည်ဟု ဆိုပြီး စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ တဆင့်ပြီးတဆင့် အဖြေမပေါ်ရာမှ တိုင်းသိပြည်သိ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များပါ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ရသည်အထိ ၄င်းရွာလေးတွင် ဖြစ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှမပြီးပြတ်ခဲ့ဘဲ ထိုဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကို ရေးသား မှတ်တမ်း တင်ထားသည့် စာအုပ်ကြောင့် ယနေ့တိုင် အငြင်းပွါးနေရဆဲဖြစ်နေပါသည်။ (more…)
ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် (လူ့ဇာတိမခံယူမှီ) ယေရှုဘုရားအဘယ်မှာနည်း?
ယေရှုကို ကိုးကွယ်ခြင်းသည် မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသလား။
Filed under: ယေရှုခရစ်တော် — amayaphay @ 11:04 am
ယေရှုကို ကိုးကွယ်မှုသည် စစ်မှန်သော ကိုးကွယ်မှုဟု အဘယ့်ကြောင့် အတတ်ပြောနိုင်ရပါသနည်း?
-ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်က ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ယော ၁၄း၆)
-အမှားအယွင်းကင်းသော သမ္မာကျမ်းစာက ပြောပါသည်။ (ယော ၁၇း၁၇)
-ထိုသမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ကို ဖျက်ဆီး၍မရခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (မ ၅း၁၈)
ရာနှင့်ချီသော ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ပရော ဖက်ပြုချက်များအားလုံး ယေရှုတွင် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ သူ့တွင်အပြစ်ရှာ၍မရပါ။ အပြစ်မဲ့သော သူ၏သက်တော်စဉ်၊ သူပြုခဲ့သော အနှိုင်းမဲ့ သဘာဝလွန်တန်ခိုးနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့် သူ၏ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း အမှုတို့အားဖြင့် မိမိသည် မျက်မြင်မရသော ဘုရား၏ ဘိသိတ်ခံဘုရားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထင်ရှားသော ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များတို့၏ အသက်ရှင်မှုတွင် အပြစ်ကင်းသော သဘာဝကို မတွေ့ရသကဲ့သို့ မည့်သည့် အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ တစ်စုံတစ်ခု မျှမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့၏ ရုပ်ကလပ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ လောကတွင် ရှိနေကြပြီး သေခြင်းတရားကို မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ သို့သော် ယေရှု၏ သချိုင်းဂူထဲတွင် ဘာမျှမရှိတော့ပါ။ ယေရှု၏သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းနှင့် အံ့ဩဘွယ် နိမိတ် လက္ခဏာမျိုးကို အခြားမည်သည့် ဘာသာတရားတွင်မှ မတွေ့နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ဤအချက်သည် ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ အရေးကြီးသည့် မတူညီ သောအချက်ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် အသက်ရှင်စေသော အာဏာ စက်နှင့် ပြည့်စုံပြီး လူသားတိုင်းတို့၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခြင်းကို ခံထိုက်သော သက်သေ များနှင့် ပြည့်စုံသည့် တစ်ပါးတည်းသော ကယ်တင်ရှင် ဘုရားသခင် ဖြစ်ပါသည်။
Filed under: ယေရှုခရစ်တော် — amayaphay @ 10:59 am
ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များထက် ထူးခြားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါး။ ခောတ်အဆက်ဆက်တွင် လူအများ၏ ကြည်ညိုလေးစား ကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ ရသော ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များ များစွာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ကြဖူးပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်အခါ လူများအပေါ် တန်ခိုးဩဇာအာဏာ လွှမ်းမိုး သက်ရောက် နိုင်ခဲ့ခြင်း ရှိခဲ့ပါသော်ငြားလည်း သူတို့ ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း ၄င်းတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် လူတို့အပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင် စွမ်းများ တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်လာကာ အချို့ကိုပင် လူများမေ့ပျောက်ကုန်ကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအထဲမှ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး မှာ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ။ ခောတ်ကာလ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာလေ သူ့ကိုယုံကြည် လက်ခံသူများ များပြားလာလေဖြစ်ပြီး နှစ်များ ကြာလာလေ လူသားတို့အပေါ် သူ၏တန်ခိုး ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်း ကြီးမားလာလေပင် ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ လက်ဝါးကားတိုင်ထက် လူများရှေ့တွင် သူ့ကို ကွပ်မျက်လိုက်ကြသော်လည်း ကျမ်းစာ လာသည့်အတိုင်း သုံးရက်မြောက်သော နေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ယနေ့တိုင် အသက်ရှင်လျက် အလုပ်လုပ်နေခြင်းကြောင့် သူ၏လုပ်ငန်းများ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ် သွားခြင်း မရှိဘဲ တိုးတက် ကြီးထွားလာရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယေရှုကို ကိုးကွယ် ယုံကြည်သူပေါင်း ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ကျော်ပင် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကို ကိုးကွယ်သည့်သူများ အားလုံးတို့တွင် စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဥာဏ် နည်းပါးသူ၊ ပညာမတတ်သူ၊ သာ၍ကူးသွားသူ၊ ဆိုးသွမ်းသူများဟု လုံးဝ မဆိုနိုင်သည့်အပြင် ကောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နာမည်အရခဲ့ဆုံးသော လူအများစုမှာ ယေရှုကို ယုံကြည်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
Filed under: ယေရှုခရစ်တော် — amayaphay @ 10:54 am
ယေရှုဘုရားသေခြင်းမှ အမှန်တကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်း အဘယ့်ကြောင့်အတတ်ပြောနိုင် ရပါသနည်း?
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်က လူထုရှေ့တွင် ယေရှုဘုရားကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌ အသေသတ်ပြီး မြေ‘မြှုပ် သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါသည်။ သူ့နောက်လိုက် များမပြောနှင့် သူ့တပည့်တော်ရင်းများပင် သူ့ကို ကျောခိုင်းခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် မကြာလိုက်ပါ ထိုမြို့၌ပင် ခရစ်ယာန်တည်းဟူသော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်ကြီးထွား လာပါသည်။ သူတို့အားလုံးက ရှင်ပြန်ထမြောက် ခဲ့သော အရှင်ယေရှုကို မြင်တွေ့ရရုံမျှမက သူတို့နှင့်အတူ ရက်ပေါင်း ၄၀ ပင်နေထိုင် ခဲ့သည်ဟု တညီတညွတ်တည်း ဆိုကြ၏။ (more…)
Filed under: ယေရှုခရစ်တော် — amayaphay @ 10:10 am
(ဟေရှာယ ၉း၆) တွင် ငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်မည်.. နာမတော်မူကား အံ့ဩဖွယ် တိုင်ပင်ဖက် တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်.. ဖြစ်ပါသည်။
(ယော ၄း၂၄) မှာ ဘုရားသခင်သည်နာမ်ဝိညာဉ် ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဆိုထားသောကြောင့် ယေရှုခရစ်တော်သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပြန်လည်တက်ကြွ သွားသော်လည်း ယခုအခါ နာမ်ဝိညာဉ်အနေဖြင့် နေရာတိုင်းတွင် တပြိုင်နက် ရှိနေပါသည်။
(ဗျာဒိတ် ၃း၂၀) မှလည်း ယေရှုခရစ်တော်က ငါသည်တခါးရှေ့မှာရပ်၍ ခေါက်လျက် နေ၏… .. ဟုဆိုထားပါသည်။
ထိုယေရှုခရစ်တော်သာ ကျွန်တော်တို့အထဲရောက်လာလျှင် ဖာရိရှဲ ကျမ်းပြုဆရာ တို့ကျင့်သောအကျင့်ထက် သာလွန်သော သူများ ဖြစ်သွားပါမည်။
(ရောမ ၈း၉) ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုမရသောသူသည် ခရစ်တော်နှင့်မဆိုင် ဟုအတိအလင်း ဆိုထားပါသည်။ (more…)